झापामा अनौठो घटना : एक श्रीमतीका २ श्रीमान मिडियामा, श्रीमतीलाई अघि राखेर भयो यस्तो च’र्काच’र्की (भिडियो सहित) - Kohalpur Trends
झापामा अनौठो घटना : एक श्रीमतीका २ श्रीमान मिडियामा, श्रीमतीलाई अघि राखेर भयो यस्तो च’र्काच’र्की (भिडियो सहित)
झापा। तपाईंको दाम्पत्य जीवन सुखमय छ । खुसीसाथ दुबैले दाम्पत्य जीवन भोग गरिरहनुभएको छ । एकआर्काको भावना बुझ्नुभएको छ । आपसी साथ र सहयोगबाट घर-व्यवहार चलाउनु भएको छ । सबै कुरा ठिकठाक छ ।
विश्वास, प्रेम, सद्भाव, सहयोग । हो, दाम्पत्य सुखका आधार हुन् यी । तर, यसमध्ये कुनै एक तत्वमा मात्र गडबडी भएमा तपाईंको दाम्पत्य उस्तै रहँदैन, जस्तो हिजोको दिनमा थियो । तपाईंको खुसी लुटिन्छ । तपाईको सुख हरण हुन्छ । तपाईंको सम्बन्ध दुई चिरा पर्छ । हिजोसम्म हाँसीखुसी बिताइरहेको दाम्पत्य जीवनमा आज अचानक कालो बादल मडारिन थाल्छ । किन यस्तो हुन्छ ? के घर-परिवारले गर्दा ? सत्रुले गर्दा ? छिमेकले गर्दा ?
होइन, तपाईं भित्रकै कुरुप तत्वले गर्दा । त्यो तत्व हो, अविश्वास । श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्ध विश्वासमा टिकेको हुन्छ । जबसम्म विश्वास हुन्छ, तबसम्म माया हुन्छ, एकअर्का बीच प्रेम हुन्छ, सहकार्य हुन्छ ।
जब विश्वास टुट्छ, माया, प्रेम, सहकार्य सबै टुट्छ । बाँकी रहन्छ त केवल शंका । र, शंकाले व्यक्तिलाई त जलाउँछ नै, सिङ्गो परिवारलाई समेत खरानी बनाउँछ ।
किनभने जुनसुकै बैवाहिक सम्बन्ध पनि माया र विश्वासमा टिकेको हुन्छ । मायाले वैवाहिक जीवनलाई स्थित बनाउनुका साथै भावनात्मक रुपमा सुरक्षित तुल्याँछ । त्यस्तै, विश्वासले जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनुका साथै सुयोग्य बनाउँछ ।
त्यसैले त, माया र विश्वास वैवाहिक जीवनसित अन्तरनिहित हुन्छन् । र, यी दुईको अभावमा वैवाहिक जीवन रमाइलो पनि हुँदैन । त्यसैले पनि जीवन जीउन तथा वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन पनि प्रत्येक दम्पतीलाई माया र विश्वासको खाँचो पर्छ । यसका बाबबुद पनि श्रीमान वा श्रीमतीबीच विश्वास भएन भने ? एक अर्काप्रति शंका उत्पन्न भयो भने ?
यस्तै क्रममा बैदेशिक रोजगारीको क्रममा कमाएको सम्पत्ति कुम्लाएर पूर्व श्रीमानसँग भागेपछि पाँचथरको मिक्लाजुङ–१ का हिमाल राई न्यायको खोजीमा भौतारिएका छन् ।दुबईमा रहँदा सामाजिक सञ्जामा चिनजान भएर विवाह गरेका हिमाल यतिबेला न्याय खोजिरहेका हुन् ।
श्रीमान भूपाल राईसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी बसेको र दुई छोरी रहेको बुद्धिमायाले बताएकी थिइन् । बुद्धिमायाको बेदना सुनेर हिमालको मन पग्लियो । र, दुबईबाट फर्किएर विहे पनि गरे । विहे गरेको ७ महिनापछि बुद्धिमाया ४ लाख रुपैया, सुनसहित पूर्व श्रीमान भूपालसँग भागेपछि यतिबेला न्याय खोज्दै भौतारिरहेका छन् ।
उनले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिँदा पनि चासो नदिएको उनले गुनासो गरे । यसैसाता श्रीमति बुद्धिमायासँग सम्पर्क गर्दा उल्टै धम्की दिएको उनले बताए ।हिमालकी दिदी निता राईले भाई सोझो भएकाले विदेशमा दुख गरेर कमाएको रकम लिएर बुहारी फरार भएको बताइन् । अहिले श्रीमती खोज्दै उनि उनको घर पुगेका छन् ।
Previous Previous post: नागरिक आन्दोलन : स्रष्टा जुलुस र महिला मार्चको जम्काभेट
Next Next post: वडा सदस्यद्वारा बलात्कार प्रयास